Naya Post Nepal | जग्गा र सम्पत्तिको नाममा आफ्नै छोराले आमालाई जं’गल मा लगेर यस्तोसम्म गरेर मा रे (भिडियो हेर्नुस्)
जग्गा र सम्पत्तिको नाममा आफ्नै छोराले आमालाई जं’गल मा लगेर यस्तोसम्म गरेर मा रे (भिडियो हेर्नुस्)
पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा ह’त्या’हिं’सा जस्ता जघन्य अ’प’ रा’ध’का घ’ट’ना’हरुले च’रम सिमा पार गरिरहेका छन । यतिबेला आफ्नै घरभित्र नै ह’त्याहिं’सा’का घ’टनाहरु बढ्दै गएका छ्न ।
श्रीमानबाट श्रीमतीको ह”त्या, छोराले बाबुको ह”त्या अनि हुदाहुदा छोराबाट पनि आमा को ह”त्या, किन बन्दैछ यस्ता द”र्द”ना”क एव म ड”र”ला”ग्दा घ’टना पछिल्लो समय सामान्य ? आजको घ’टना पनि यस्तै प्र’कृतिको रहेको छ ।
मोरङ जिल्लाको पथ्री भन्ने ठाउमा एकदमै दु”ख”द एवम द”र्द”ना” क घ\_टना घ’टेको छ । जगमाया श्रेष्ठ नाम गरेकी एक आमा बिगत चार दिनदेखी ह”रा”इ”र”हेकी थिइन जुन कुरा उनको आफ्नै का न्छा छोरालाइ समेत थाहा हुदैन , कस्तो
अ”च”म्म ! तर अझ बढी अ”च”म्मको कुरा त के छ भने चार दिन अगाडि उनै छोरा मर्निङ वाल्कको लागि निस्केको भनेर हातमा चप्प ल बोकेर जङ्गलबाट ह”स्या” ङ”फ”स्याङ गर्दै निस्केको स्थानियले देखेका रहेछ्न ।
कहिले मर्निङ वाल्क नजाने मान्छे यसरी एक्कासी चारै बजे जङ्गल को बाटो मर्निङ वाल्क जानू, आमा चारदिनदेखी हराउनु र अहिले चारदिनपछी सोही जङ्गलमा एक मृ”त मान्छेको कं”का”ल भेट्टिनुको पछाडि केही न केही त र”ह”स्य पक्कै छ भन्ने कुरा हामी अनुमान पनि लगाउन सक्छौ । उनै छोरालाइ मर्निङ वाल्कबाट आउदै गर्दा उनको शरीरबाट मट्टीतेलको ग”न्ध आएको कुरा पनि स्थानियले बताएका छ्न । ।
त्यहि बेला छिमेकीहरुले जङ्गलको बिचमा ठूलो आ’गो ब’लेको पनि देखेका रहेछ्न । साक्षी स्थानीयहरुको बयान लाई ध्यान दिने हो भने उनिमाथि शं”का गर्ने अनेकौ ठाउँ रहेका छ्न र त्यसै आधारमा प्र’ह रीले उनलाइ हि”रा”स”तमा लिइसकेको अबस्था छ ।
पैसाको मु’ख का’लो हुन्छ भन्छन मान्छेले पैसाको अगाडि को आ फ्नो को बि”रा”नो पनि छुट्ट्याउन छोडिसक्यो अब त । केही समय अगाडीदेखि आमाछोराको बिचमा जग्गाको बिषयलाइ लिएर म”न” मु”टा”ब चलिरहेको र जग्गाकै बिषयमा मुद्दा पनि चलिरहेको कुरा बाहिरिएको छ ।
यसै बिषयलाइ लिएर आमाछोराको बिचमा बोलचाल समेत नरहेको स्थानियले बताएका छ्न । पाच क’ट्ठा जग्गा छोराको जग्गा आमाको नाममा पास गर्नुपर्ने भनेर सुनुवाइ समेत भैसकेको गाउलेहरु बताउ छन ।
यहि मुद्दाको सुनुवाइ भएपछी आमा बे”प”त्ता थिइन तर आज अचानक जङ्गलमा एक ला”छ्को कं”का”ल भेटिएको छ र रातो चुराले यो कं”का”ल महिला कै रहेको प्रमाणित पनि गरेको छ ।
ला”छ पनि एकदमै न”ज”ला”इ”नु पर्ने ठाउमा ज’ला’इएको छ र अझैसम्म रातो चुराका टुक्राहरु स्पष्ट देखिएको गाउलेहरु बताउछ्न । यो हत्या छोराले नै गरेको हुनुपर्ने सबैको राय छ र सबुत प्रमाण पनि उनको बि”रुद्ध मै रहेको छ ।
२०७८ माघ १७, सोमबार प्रकाशित 1 Minute 144 Views